Hanohy ny asany ny ben’ny tananan’Ambohidratrimo - Madagascar Informations
28 novembre 2015 9 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Mialohan’ny hanombohana ny asa sy ny adidy rehetra eo amin’ny kaomina hiadidiany dia naneho ny fisaorana an’Andriamanitra sy ireo vahoaka rehetra ao amin’ny kaomina Ambohidratrimo Atoa RAJAONASOLO Clovis Arthur ,rehefa lanim-bahoaka ho ben’ny tanana indray tamin’ny fifidianana farany teo .
Ny asabotsy 28 novambra 2015, teo amin’ny kianjan’i Odiame Rakoto no nisaorany ireo vahoaka nifidy azy eny fa na ireo tsy nifidy azy aza . Vahiny manan-kaja maro no tonga nanotrona ny fotoana ka vavaka narahana kabary sy fampisehoana manetriketrika nataon’ireo artista maro no namenoana ny tontolo andro.
Nozaraina vary ihany koa ny vahoaka ka 1taonina isam-pokontany no nomena ireo fokontany 9 mandrafitra ny kaominina. Nandritra ny 3 taona nitondrany dia tetik’asa maro no vitany, izay tombony ho azy ka mbola nahalany azy indray satria mahatoky ny fomba fiasany ny mpiara-belona aminy. Araka ny tatitra dia samy ahitana toeram-pitsaboana marary , toeram-pitsaboana nify , trano fampiterahana,sekoly ahafahan’ny zaza madinika feno 2taona sy tapany mianatra avokoa ireo fokontany rehetra ao.
Tanjona napetrany mandritra ny fotoam-piasana manaraka ny fanamboaran-dalana hanatsarana ny tanana sy hanamora ny fivezivezen’ny mponina hatrany amin’ny 50 %.
Tsy mahefa izany irery anefa ny kaominina fa tsy maintsy miankin-doha ary miara-miasa amin’ireo mpamatsy vola mba hampandrosoana haingana ny tanana. Hatomboka amin’ny herinandro ny fanaovana izany tetik’asa izany ary nanome toky ny vahoa ka izy fa tena hiasa.
← L’île de Nosy Be élue meilleure site de vacances par Tripadvisor
Hanolotra seho miavaka eto andrenivohitra – Herbert Léonard →
12 février 2015 Madagascar Informations 0
19 janvier 2016 Madagascar Informations 0